Inona avy ireo tombony sy fatiantoka amin'ny lamba polyester
I. Tombony amin'ny lamba polyester: 1. Ny lamba polyester dia manana tanjaka lehibe. Ny tanjaky ny fibre staple dia 2.6 ~ BAI5.7 cN / Dtex, ary ny tanjaky ny fibres mahery dia 5.6 ~ 8.0cN / Dtex. Noho ny fananany hygroscopic ambany dia mitovy ny tanjany mando sy ny tanjany maina. Ny fiantraikany ...
Taffeta dia antsoina koa hoe polyester taffeta, lamba tena mahazatra eo amin'ny fiainana, fa ankoatry ny olona matihanina dia tsy mazava ny olon-tsotra raha ny fahalalany azy, ka azontsika ny toetran'ny polyester taffeta. taffeta lamba Polyester taffeta toetra mampiavaka ny lamba: Polyest ...
Hangzhou DRO Textile- Mpamatsy lamba ivelany
Hangzhou DRO Textile Co., Ltd. dia lamba filament, lamba polyester lamba, lamba lamba Oxford, lamba fandokoana lamba, lamba vita amin'ny kofehy, lamba akrilika, lamba taffeta, lamba mihodina pongee, lamba vita amin'ny kofehy ary vokatra hafa an'ny matihanina orinasa mpamokatra sy fanodinana, mpiara-miasa aminay ...